July 2018 – AsiaApps
Download Speed ကိုအမြင့်ဆုံးထိမြှင့်တင်ပေးမယ့် Advanced Download Manager (ADM)
July 31, 2018 August 1, 2018 WaziynReviewsNo Comment on Download Speed ကိုအမြင့်ဆုံးထိမြှင့်တင်ပေးမယ့် Advanced Download Manager (ADM)
Hello….. အဆွဲကြမ်းတဲ့သူ (download ပြောတာပါ ?) လေးတွေရှိလား? ပုံမှန် browser ကနေ download ဆွဲရတာကြာလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား? Advanced Download Manager(ADM) ဆိုတဲ့ app နဲ့ဆိုရင်တော့ ကြာတယ်ဆိုတာကိုအိပ်မက်ထဲမှာပဲပြန်မြင်ရတော့မှာနော် ?)။ ဒီ…
Password နဲ့ပတ်သတ်သမျှ manage လုပ်ပေးမယ့် LastPass Password Manager
July 31, 2018 August 1, 2018 ncReviewsNo Comment on Password နဲ့ပတ်သတ်သမျှ manage လုပ်ပေးမယ့် LastPass Password Manager
ကျွန်တော်တို့ ဘယ် service ပဲသုံးသုံး user account တွေနဲ့ မကင်းတာများပါတယ်။ Account တစ်ခုဆိုတာနဲ့ အရေးကြီးဆုံးကတော့ password ပါ။ ကိုယ့်password က secure ဖြစ်ရဲ့လား။ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ browser ကကော…
သူများထက်ဂေါ်တဲ့နည်းနဲ့သီချင်းတွေနားထောင်ကြမယ် – AudioVision Music Player
July 31, 2018 August 1, 2018 WaziynReviewsNo Comment on သူများထက်ဂေါ်တဲ့နည်းနဲ့သီချင်းတွေနားထောင်ကြမယ် – AudioVision Music Player
လူသားတိုင်းဟာ သံစဉ်တွေနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လက်ခံကြမလား။ တေးဆိုငှက်လေးတွေရဲ့အသံကအစ အကြမ်းစားသီချင်းတွေအဆုံး ဒီနေ့လို Digital ခေတ်ကြီးမှာလမ်းသွားရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် online ပေါ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နေ့မှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက်တော့ လိုက်ပါစီးမျောမိမှာပါ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? သီချင်းတွေကိုတချို့ကခံစားချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီလို့နားထောင်ကြမယ်၊ တစ်ချို့ကတော့အနားယူအပန်းဖြေရင်းနဲ့ relax လုပ်ဖို့နားထောင်ကြတာလည်းရှိပါတယ်။ အခု မိတ်ဆက်ပေးမဲ့ App လေးကတော့ ကိုယ့်အားလပ်ချိန်မှာသီချင်းတွေကိုပိုပြီး…
Facebook app တွေထဲက အနည်းဆုံးတစ်ခုကို အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်တဲ့ လူဦးရေ ၂.၅ ဘီလီယံ
July 31, 2018 July 31, 2018 MoonApp NewsNo Comment on Facebook app တွေထဲက အနည်းဆုံးတစ်ခုကို အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်တဲ့ လူဦးရေ ၂.၅ ဘီလီယံ
Facebook ရဲ့ အဓိက app ကို စွန့်ခွာသွားတဲ့သူတွေရှိပေမယ့် သူ့ရဲ့ အခြား app တွေဖြစ်တဲ့ Instagram နဲ့ WhatsApp တို့မှာတော့ အသုံးပြုသူအရေအတွက် တိုးတက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုအကြောင်းအရာကို ပြီးခဲ့ရက်အနည်းငယ်က ဇွန်လအတွက် ပထမဦးဆုံးကြေညာချက်အဖြစ်…
အနာဂါတ်ကြယ်ပွင့်တို့အတွက် StarMaker app
July 31, 2018 August 1, 2018 WaziynReviewsNo Comment on အနာဂါတ်ကြယ်ပွင့်တို့အတွက် StarMaker app
အဆိုဝါသနာရှင်လေးတွေရှိလား…….? ဟုတ်ပြီ သတင်းကောင်းပါတယ်နော် သီချင်းအစုံကိုစိတ်ကြိုက်ဟဲနိုင်မယ့် StarMaker ဆိုတဲ့ App လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ App Market တွေပေါ်မှာ karaoke App တွေကအထူးအဆန်းတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်လေးနဲ့အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ထူးခြားတာလေးတွေရှိနေလို့ပေါ့နော်။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အလန်းဆုံးအချက်လေးကတော့ဒီ App လေးမှာအချို့…
Logo အလန်းတွေဖန်တီးနိုင်မဲ့ PixelLab
July 31, 2018 August 1, 2018 WaziynReviewsNo Comment on Logo အလန်းတွေဖန်တီးနိုင်မဲ့ PixelLab
Hello ….. မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးရတာကြိုက်တဲ့ အနာဂါတ် designer ပရိတ်သတ်ကြီးတို့အတွက် အလန်းစား app လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ App လေးနာမည်က “PixelLab – Text on picture” လို့ခေါ်ပြီး…
Notch ဒီဇိုင်းကို မကြိုက်တဲ့သူတွေတောင် သဘောကျမိနိုင်တဲ့ Oppo F9 နဲ့ F9 Pro တို့ရဲ့ “Waterdrop” screen
July 31, 2018 July 31, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Notch ဒီဇိုင်းကို မကြိုက်တဲ့သူတွေတောင် သဘောကျမိနိုင်တဲ့ Oppo F9 နဲ့ F9 Pro တို့ရဲ့ “Waterdrop” screen
Oppo အမှတ်တံဆိပ်ဟာ China နဲ့ India ဈေးကွက်အတွင်းကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် အောင်မြင်မှုရလာပြီးနောက်မှာ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပါ တစ်စတစ်စ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ တစ်မူထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ အသုံးပြုသူတွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့ Oppo ဟာ အခုတစ်ခေါက်မှာလည်း “Notch”…
Social Media အတွက် Post လှလှလေးတွေ ဖန်တီးပေးမယ့် Adobe Spark Post
July 31, 2018 July 31, 2018 ncReviewsNo Comment on Social Media အတွက် Post လှလှလေးတွေ ဖန်တီးပေးမယ့် Adobe Spark Post
သင်ဟာ facebookမှာ celeတစ်ယောက်ပါလား :3 Just Kidding. သင်ဟာ social media ပေါ်မှာ ပုံလှလှလေးတွေရိုက်တင်ချင်သူတစ်ယောက်ပါလား၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်business လုပ်ငန်းကြော်ညာအတွက် product အကြောင်းတင်တဲ့အခါမှာ customer တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင် visual လှလှလေးတွေကို…
Zip file တွေကို ချုပ်ချုပ်၊ ဖြည်ဖြည် – ZArchiver ရှိတယ်
July 31, 2018 August 1, 2018 ncReviewsNo Comment on Zip file တွေကို ချုပ်ချုပ်၊ ဖြည်ဖြည် – ZArchiver ရှိတယ်
Downloadချတဲ့အခါ၊ Uploadတင်ချင်တဲ့အခါ Zip fileအဖြစ် compress လုပ်ပြီး file shareတာက နှစ်ဖက်လုံးအတွက် ပိုထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ phone or tablet ကနေဆို compressed fileတွေကို ဖြည်ရတာ အဆင်မပြေတတ်ပါဘူး။ Deviceတော်တော်များများက…
Wun Zinn Comic နဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်တွေဖတ်လို့ရနေပြီနော်
July 31, 2018 August 1, 2018 ncReviewsNo Comment on Wun Zinn Comic နဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်တွေဖတ်လို့ရနေပြီနော်
Wun Zinn ဆိုတာနဲ့ စာအုပ်တွေဝယ်ပြီး ဖတ်လို့ရတဲ့ application မှန်း လူတိုင်းသိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ Wun Zinn Comic ဆိုတာကော သိပြီးပြီလား။ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ထွက်ထားတာဘယ်လောက်မှမရှိသေးတဲ့ app လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Wun…